Kudar badhanka Pinterest Pinit badhanka WordPress | Martech Zone
Kudar badhanka Pinterest Pinit badhanka WordPress
Axad, Febraayo 5, 2012 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest ayaa si aad ah kor ugu sii kacaya caan ahaanta… aad u badan sidaa darteed baraha kale ee bulshada la wadaago waxay bilaabeen inay lumiyaan xoogaa dhul ah. Waxaan rumeysanahay in faa'iidada Pinterest ay tahay inay tahay shey muuqaal ah oo sifiican loogu talagalay in lala wadaago macluumaadka. In kasta oo boggag kale ay leeyihiin liisas caajis ah, haddana 'mozaic' kaas oo ay soo saarto Pinterest waa mid fudud oo lagu boodboodo si loo helo waxa qabsaday xiisaha.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, baraha bulshada la wadaago ayaa ah soosaarayaal taraafiko oo cajiib ah, marka maxaad ugu fududaan weyday inaad la wadaagto waxyaabahaaga? Maanta, waxaan ku darnay Pinterest Pinit badhanka mawduuca WordPress. Way fududahay in la sameeyo… waxaana xitaa ku darnay jiidaya badhanka yar ee muuqaalka yar ee muuqaalka ah sida sawirka URL.
Haddii aad jeclaan laheyd Sawir muuqaal ah si aad u muujiso, halkan waa noodhka mawduuca si loogu daro badhanka 'Pinit' ee mawduucaaga gudaha Loop:
&media=ID), 'thumbnail' ); echo $thumb['0']; ?>&description=" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Ku Xidh
Haddii aadan rabin inaad qeexdo sawirka, waa kan lambarka kale:
&description=" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Ku Xidh
Sidoo kale - hubi inaad kudarid qoraalka Pinterest kanaga footer.php
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan soo saarista badhanka 'Pinit' ama si aad u eegto barnaamijyadooda kale iyo astaamahooda, fiiri a Goos goos bogga. Dadka ku jira Buffer ayaa sidoo kale sharaxay Sida Loogu Daro Badhanka 'Pinterest Pin' badhankaaga Blogga Dadkuna Haloogu Dhejiyo Qoraallada leh Sawirada iyadoo la adeegsanayo noocii ugu dambeeyay ee fiilada Digg Digg.
Tags: qanjirbadhanka pinitbadhanka pinterestWordPress
Saacad Maalin ah Warbaahinta Bulshada…
10 Dariiqo oo Kordhinta Iibinta 2012
Febraayo 7, 2012 saacadu markay tahay 10: 30 AM
Waad goyneysaa Waxaa laga yaabaa inaan yara cufan yahay laakiin taasi waa batoonka ugu horreeya ee "Pin it" ee aan arko.
Febraayo 7, 2012 saacadu markay tahay 11: 20 AM
Shimbirka hore ayaa hela taraafikada!
Apr 11, 2012 at 11: 05 AM
nvmnd waan sameeyay. Ma shaqeynayso haddii aadan haysan "muuqaal muuqaal ah" oo gaar ah oo loogu talagalay qoraaladaada.
Apr 11, 2012 at 6: 55 PM
@ twitter-129525014: disqus, maahan inay wax ku lahaato Muuqaalka Muuqaalka ah, laakiin waxay u baahan tahay nooc sawir ah oo bogga ah.
May 21, 2012 at 10: 09 AM
Aqoonsi), 'thumbnail'); echo $ suulka ['0']; ?>
Waxaan kugu hayaa mahadnaq dhan oo qurux badan, mudane.
Waxay ii ogolaatay inaan hagaajiyo lambarka 'ShareThis' si loogu isticmaalo wordpress (ShareThis waa wax fiican laakiin waxay hubaal tahay inay u baahan tahay wax ka bedel badan intaanay waxtar yeelan).
Haddii ay dhacdo in qof ku dhaco tan isla xaaladdayda oo kale:
<span class = 'st_pinterest_hcount' displayText = 'Pinterest' st_img = 'ID),' thumbnail '); echo $ suulka ['0 ′]; ?> & sharaxaad = '>
Kudar waxyar oo kale oo aad ubaahantahay sida st_title st_url st_blahblahblah
Waxaan rajeynayaa in faallooyinkaan aan la sifeynin…
wax ka bedel: goddammit wuu kala baxaa, taasi waa wax fiican. Lagu daray dhawr meelood iyo jajab si ay u muuqato.
May 21, 2012 at 10: 18 AM
Haye runtii waan helay, 1 daqiiqo kadib, inaad sidan ku sameyn karto:
(gudaha madaxa tags)
pinterest ayaa markaa sawirka ka soo jiidaya 'opengraph' malarkey ah. Nadiif ah!
May 21, 2012 at 10: 49 AM
@fkypie: disqus Taasi way fiicantahay inay adeegsanayaan xogta Opengraph! Waad ku mahadsantahay wadaagista.
May 21, 2012 at 10: 51 AM
In kabadan soo dhaweyn. Waa inaan ku qaatay qaybta ugu fiican ee laba saacadood ah markaan isku dayayay inaan saxo tan… marka waxaan rajaynayaa in laga yaabo inaan caawiyo qof kale si aan waxoogaa waqti ah u ilaaliyo!
Jun 3, 2012 at 6: 02 PM
Uhm, ma heli karo buufinka miiska lagu gado. Waxaan u raacay tilmaamahaaga talaabo talaabo ah, wax walbana way shaqeeyaan laakiin buufinka miiska. Fikrad kasta oo ku saabsan sida loo hagaajiyo tan?
Jun 3, 2012 at 6: 20 PM
@ twitter-61936398: disqus Waa inaad leedahay count-layout = ”jiif” si miiska looga soo baxo midigta. Haddii aad taas sax tahay oo aad leedahay qaab-dhismeedka oo sax ah, waxaad u badan tahay inaad sugto pinterest si dhab ah loo cusbooneysiiyo tirinta. Ma aaminsani inay muujinayaan markay eber tahay.
Jun 4, 2012 saacadu markay ahayd 3:01 AM
Hi Douglas, gabi ahaanba waad saxantahay !!! 🙂 Haddii aadan lahayn biinanka oo miiskuna uu eber yahay, ma soo muuqan doono badhanka "Pin it". Waxaan dhigay biin tijaabo ah si aan u hubiyo, iyo markii miiska la cusboonaysiiyay ee "1" ay ka muuqatay badhankiisa agtiisa. Waad ku mahadsan tahay tilmaantaada! 🙂
Waxaa laga yaabaa in astaantan lagu sharxayo isla qodobka.
Jun 4, 2012 saacadu markay ahayd 7:41 AM
Hagaag, waxaan rajeyneynaa in dadku ay arki doonaan faalladaada! 🙂
Jun 21, 2012 saacadu markay ahayd 7:36 AM
Khibradeyda xagga pinterest:
Waxaan u isticmaalay pinterest si aan u wanaajiyo darajadayda boggeyga natiijaduna way fiicnayd, way ka fiicnaatay bogga 6 illaa kaalinta 4aad ee bogga 1aad 3 toddobaad gudahood.
Waxaan ogaaday in iibiyuhu magaciisu yahay "pinterest", oo kaalinta koowaad galay markii aad "pinterest" ka raadinayso Fiverr, wuxuu ku soo saaray natiijooyinka ugu fiican boggeyga internetka. Iibiyaha ayaa ku dhajinaya boggeyga 75 qof oo kala duwan, ma hubo sida uu tan u sameeyay, laakiin waxay hagaajisay darajadayda SERP. Waxaan isku dayay 5 iibiyeyaal kale oo bixiya riwaayadaha pinterest on Fiverr laakiin ma aysan hagaajin karin darajada boggeyga. Ma garanayo sababta.
Ka dib markii aan u isticmaalay pinterest SEO in muddo ah, waxaan soo helay qaar ka mid ah faa'iidooyinkiisa:
- Google wuxuu jecel yahay calaamadaha warbaahinta bulshada.
- Biin kasta waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay 3 xiriiriye oo soo gala.
- Xiriiriyaha iyo sawirrada laga soo qaado pinterest waa dofollow.
- Xusuusnow inaad kaxirto iskuxirayaasha biinanka si aad uguhesho Google.
15, 2015 at 9: 41 PM
Ka blogger ahaan waxaan u isticmaalaa shaashad si aan u wanaajiyo darajadayda boggeyga natiijaduna way fiicnayd, waxay hagaajisay bogaggayga. Waad ku mahadsan tahay qoraalkan wargelinta leh! 🙂